Iikiti zokuguqula ipetroli-to-propane ye-ONY ivumela ukunciphisa iindleko, ukukhutshwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iikiti zokuguqula ipetroli-to-propane ye-ONY ivumela ukunciphisa iindleko, ukukhutshwa
Umyili wetekhnoloji yamandla acocekileyo i-ONYX Systems ibhengeze ukufumaneka kwezixhobo zokuguqula i-propane ezikufutshane ne-zero zero ze-John Deere Gator izithuthi eziluncedo, ezixhamla abaqhubi ngeendleko zepetroli ezisezantsi, ukukhutshwa kwe-ultra-low, kunye nokwanda kwemveliso.
Iikiti eziqinisekisiweyo ze-EPA & CARB zifanelekile i-TX kunye ne-HPX John Deere Gators eyenziwe emva kwe-2015 kwaye iyafumaneka ukufakwa kubathengisi abathatha inxaxheba bakaJohn Deere.
"Iikhithi zokuguqula i-ONYX propane kunye neenkqubo ze-injini ye-propane ziye zabonelela ngamakhulu ama-landscapers, iikholeji, iipaki, kunye noomasipala isisombululo esithembekileyo nesicocekileyo kwii-mowers zabo zorhwebo ezinciphisa iindleko zokusebenza malunga ne-$ 1.00 ngeyure yokusebenza ngomatshini," kusho uJeremy Hahne, i-VP yokuthengisa. kwi ONYX.
"Ezi zigqeba zifanayo ngoku zinokuguqula iinqwelo zabo zeGator zibe zihambelana nokusingqongileyo, ixabiso eliphantsi, kunye namafutha athembekileyo."
Iikhithi ziyafumaneka ukuze zifakwe ngokusebenzisa abathengisi abathatha inxaxheba.